Maraykanka oo caddeeyay inuu qorshe FOG ka damacsan yahay Somalia + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo caddeeyay inuu qorshe FOG ka damacsan yahay Somalia + Sawirro
Maraykanka oo caddeeyay inuu qorshe FOG ka damacsan yahay Somalia + Sawirro
(Washington, DC) 13 Abriil 2019 – MW Maraykanka ee Donald Trump ayaa saxiixay wareegto uu sanad ku darayo wax lagu sheegay xaalad deg deg ah ee ay ciidamada Maraykanku ka wadaan dalka Somalia, isagoo sheegay in “ay halkaa dalkiisa uga imanayso halis aan caadi ahayn.”
Yeelkeede, waloow sanad lagu dhawaaqay misna saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in howlgallada Maraykanka ee Somalia ay sanado badan qaadan karaan.
Saraakiisha oo sheegay in dadaallada Maraykanku ay mira dhalayaan ayaa sheegay in ay dhici karto in howlgalladani ay qaataan ilaa 2026-ka.
Muddo 2 sano ahba ciidamada gaarka ah ee US Navy SEAL oo kaashanaya Komaandooska Somalia ee Danab, oo ilaa iminka gaaraya 500 oo askari ayaa weerarro qorshaysan ku hayey kooxda Shabaab.
Maraykanka ayaa sheegay inay doonayaan in ay Danab gaarsiiyaan ilaa 3,000 oo askari oo iskood u fulin kara howlgallo ay Shabaab uga saaraan degmooyinka iyo tuulooyinka ay kaga sugan yihiin dalka.
“Ujeedku waa inaan sanadkii diyaarinno ilaa 300 oo askari, ugu dambaynna waxaan doonaynaa 5 batalyan iyo guuto saldhigga joogta,” ayuu yiri Becky Farmer, oo ah afhayeenka Taliska Africa Command, oo la hadlay CNN.
“Waxay nala tahay inay qaadan doonto ilaa 7 sano in aan ciidamadan dhamaystirno,” ayuu raaciyay, isagoo sheegay inay kasoo hormari karto kana dib mari karto.
Pentagon ayaa sheegay inay Somalia ka joogaan 500 ilaa 600 oo askari, iyadoo Somalia ay tahay dalka qura ee Afrikaan ah ee ay Maraykanku si joogto ah duqaymo uga fuliyaan.
Previous articleDAAWO: Qof noocee ah ayuu ahaa Khaalid oo ah wiilkii saaka askarigu khaarajiyay?
Next article‘’Askarigii dhibaato u gaysta qof shacab ah wax GABAAD ah ma heli doono‘’ – Saraakiisha ugu sarreeysa amaanka oo Baarlamanka hor taagan